firavoravoana · Jona, 2019 · Global Voices teny Malagasy
firavoravoana · Jona, 2019
Tantara mikasika ny firavoravoana tamin'ny Jona, 2019
Hafanam-po27 Jona 2019
Sary maromaro kokoa, amin'ity indray mitoraka ity tamin'ny andro faharoan'ny Vovonana
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Janoary 2015) Mety ratsy angamba ny fifandraisana aterinetonao na ratsy ny andro, fa tsy hahita na oviana na oviana ianao ka hoe mpaka sary tsy hazoto hanao izany. Mahafinaritra ahy ny maka sary ny fotoana manokana indrindra rehefa mahita ianao fa mifaly ny olona. Mendrika ny...
Oviana ianao no nanatevin-daharana ny Global Voices? (Fandraisana anjara tamin'ny LAHATSARY)
Oviana no nanatevin-daharana ny Global Voices ianao ?
Ireo pejinay momba an i firavoravoana
zava-mahafinaritra, firavoravoana, fahafinaretana